Dad Ajaanib ah Oo ku geeriyootay dagaalka u dhaxeeya Armenia & Azerbaijani | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dad Ajaanib ah Oo ku geeriyootay dagaalka u dhaxeeya Armenia & Azerbaijani
Dad Ajaanib ah Oo ku geeriyootay dagaalka u dhaxeeya Armenia & Azerbaijani
Ugu yaraan 64 dagaalyahano reer Suuriya ah oo taageersan Turkiga ayaa lagu dilay isku dhacyo u dhexeeya ciidamada Armenia iyo Azerbaijani oo ka dhacay Nagorno-Karabakh, sida ay sheegayaan kooxda kormeeraha dagaalka ee fadhigoodu yahay Britain.
Waxay ka mid ahaayeen 1,200 oo dagaalyahanno ah oo ka socda kooxaha taageersan Xukuumada Ankara, iyada oo Suuriya u diray in ay u dagaallamaan Azerbijaan tan iyo usbuucii la soo dhaafay, Waxaana Taa Walaac Ka Muujiyay Kormeerayaasha Xuquuqda Aadanaha ee Suuriya.
Ugu yaraan 36 ka mid ah ayaa lagu diley iska hor imaadyadii dhacay 48 saac ee la soo dhaafay oo keliya, waxaana kormeerayaasha ay intaas ku dareen in taasi sii kordhisay tiradii hore ee ahayd 64-ka.
Armenia ayaa ku eedeysay Turkiga in ay dirtay dagaalyahanada Siiriya si ay uga dagaalamaan dhanka Azerbijaan ee gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno-Karabakh,Halka ay ku Gacan Sayreen Labada Dal ee Azerbaijan iyo Turkiga.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka dalbaday Turkiga in uu sharaxaad ka bixiyo waxa uu ku sheegay imaatinka dagaalyahanada xagjirka ah ee Azerbaijan.
Warbixinno sirdoon ayaa xaqiijisay in 300 oo dagaalyahanno Suuriyaan ah laga soo uruuriyey “kooxaha jihaad doonka ah” siina mareen Dhanka Turkiga iyagoo ku sii jeeda Azerbaijan.
Dowlada Turkiga ayaa ku gacanseyray Ruushka, Faransiiska iyo Mareykanka, ee tallaabada xabad joojinta Gobolka Lagu Muransayahay ee Nagorno-Karabakh.
Bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibedda ee Suuriya ayaa ka digtay “faragelin qaawan oo Turkiga ah” ee uu ku samayay Khilaafka ku saabsan Muranka Labada